माथेमा आयोग र डा.केसी हत्यारा हुन् : डा. रामकुमार अधिकारी - Nepali Online News Media-shikharnews.com
माथेमा आयोग र डा.केसी हत्यारा हुन् : डा. रामकुमार अधिकारी
काठमाडौं, २७ असार । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का प्रदेशसभा सदस्य एवं प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेजका लगानीकर्ता मध्येका एक सदस्य डा. रामकुमार अधिकारीले माथेमा आयोग र डा. केसी हत्यारा भएको आरोप लगाएका छन् । उनले पत्रकारहरुले डा. गोविन्द केसीलाई देवत्वकरण गरेको आरोप पनि लगाएका छन् ।
उनले माथेमा आयोगको प्रतिवेदन र डा.गोविन्द केसीको हठको कारण नेपाली विद्यार्थीहरु बिदेशमा पढ्न जान बाध्य भएको बताए । उनले भने, “माथेमा आयोग र डा.केसी हत्यारा हुन् । बंगलादेशमा डाक्टर पढेर आएका नेपाली विद्यार्थीहरु गत वर्ष फागुनमा विमान दुर्घटनामा परेर मरे । यसको दोषी उहाँहरु नै हो । नेपालमा डाक्टरी पढ्न पाउने वातावरण भएको भए उनीहरु मर्ने थिएनन् ।”
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै डा. अधिकारीले भने, “नेपाल विश्वमै एउटा यस्तो देश हो जहाँ विधिको कुनै मूूल्य छैन । कानूनको पालना गरिँदैन । एकजना सरकारी कर्मचारी अनशनमा बसेर सरकारलाई दलाल भन्दै यसो गर, उसो गरे भनेर निर्देशन दिन्छ । अनि पत्रकारहरुले उसैको पक्षमा समाचार लेख्न मरिमेट्छन् । डा.गोविन्द केसीको विरुद्धमा बोल्नेहरु माफिया हुन् भन्न कुनै आधार चाहिँदैन । यस्तो मुलुक हो हाम्रो देश ।”
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा भएको साक्षात्कारमा उनले थपे, “मनमोहन मेडिकल कलेजमा २६ सय जनाको एकलाख, दुईलाखको लगानी छ । अबका केही दिनमा डा.केसीसँग राजधानीमा मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने सहमति हुन्छ । मनमोहन मेडिकल कलेज लिलाममा जान्छ । फेरि पत्रकारहरुले नै लेख्नेछन्, माफियाहरुले सञ्चालनमा ल्याउन थालेको मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज भयो, यस्तै हो ।”